मेडिकल शिक्षाको वेथितिबारे बहस : शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारिकरण गर्नु नै गलत ! - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more मेडिकल शिक्षाको वेथितिबारे बहस : शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारिकरण गर्नु नै गलत ! - www.khabardabali.com
मेडिकल शिक्षाको वेथितिबारे बहस : शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारिकरण गर्नु नै गलत !
मंसिर १० गते, २०७६ - १६:५९
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षामा देखिएको चरम विकृतिलाई हल गरी सुधारको माग राख्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका तत्कालिन प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन शुरु गरेको पनि १० बर्ष बितिसकेको छ । १० बर्षमा ७ जना प्रधानमन्त्रीहरु फेरीसकेका छन् तर उनको मागले अझै मुर्तरुप लिनसकेको छैन ।
मेडिकल क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिको अन्त्य गरी चिकित्सा शिक्षालाई साधारण जनताले पढ्न सक्ने गरी सर्वशुलभ बनाइनु पर्ने माग राख्दै डाक्टर केसीले ०६९ असार २१ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा अनसन शुरु गरेका थिए । त्यसयता उनले १७ औं पटक अनसन बसिसकेका छन् । उनको मागले आंशिक सफलता पाए पनि चिकित्सा क्षेत्रलाई माफियातन्त्रबाट मुक्त गरी विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय र सर्वशुलभ शिक्षा दिने अवस्था अझै सिर्जना भएको छैन ।
डाक्टर केसीका यिनै मागलाई सम्बोधन गर्न वि.सं. ०७१ साल पुष १८ गते त्रिविका तत्कालिन उपकुलपति प्रा.डा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकमा ८ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो । यस कार्यदलले चिकित्सा शिक्षामा देखिएको समस्यालाई बिस्तृत रुपमा अध्ययन गरी सुधारको प्रावधानसहितको प्रतिवेदन ०७२ साल असारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
माथेमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रतिवेदन कार्यन्वयप्रति सरकारको उदासिनताले कतै मेडिकल माफिया र सरकारबीच साँठगाँठ भएको त छैन भन्ने आशंका जनस्तरबाट उठ्न थालेको छ ।
डाक्टर बन्ने अभिलाषा लिएर उच्च शिक्षा पढ्न आएका एमबिबिएसका विद्यार्थीहरु अहिले विभिन्न मेडिकल कलेजमा चर्को मूल्य तिरेर पढ्न बाध्य छन् । मेडिकल कलेजले लिएको चर्को मुल्यको विरोधमा विद्यार्थी, अविभावक पठनपाठन ठप्प गरेर चरणबद्धरुपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । मेडिकल कलेजले प्रत्येक विद्यार्थीबाट सात लाखदेखि २२ लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको भन्दै तत्काल शुल्क फिर्ता लिन मेडिकल संचालक र सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै विद्यार्थीहरुबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिएपनि मेडिकल संचालकले कुनै चासो देखाएका छैन । चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको बिक्रृति, कमजोरीलाई दिर्घकालीन रुपमा समाधान गरी सुधार ल्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चिकित्सा शिक्षा सेवा सुधार उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक डाक्टर केदारभक्त माथेमा, चितवन मेडिकल कलेजमा एमविबिएस अध्ययनरत विद्यार्थी प्रकाश चन्द र नेकपाकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रिसँग खबर डबलीको तर्फबाट कुराकानी गरिएको सम्पादीत अंश :
मंसिर १० गते, २०७६ - १६:५९ मा प्रकाशित
शिक्षालाई निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउनु नै सरकारकाे ठूलो गल्ती
मेडिकल शिक्षालाई राज्यले बजारमा छोड्ने निर्णय गर्यो । त्यो नै सबैभन्दा पहिलो गलत कदम थियो । यसमा कसैलाई लाग्ला, बजार नियन्त्रित मेडिकल शिक्षा नभएको भए अर्बौ लगानी बिदेशिने थियो, हजारौं डाक्टरहरु उत्पादन हुने थिएन । बजार अर्थतन्त्रमा यस्तो हुनु नजायज होइन भन्ने तर्क गर्लान् । यो नै सत्य होइन ।
निजी क्षेत्रले ठुला–ठुला मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्छन् । अस्पतालहरु सञ्चालन गर्छन् भनेर सरकारले शुरुमा अरु कुरामा ध्यान दिएन । सरकारको यहाँ कमजोरी रह्यो । विद्यार्थी र प्राध्यापक डाक्टरको अनुपात के हुन्छ ? सिट संख्या कति थप्ने ? मापदण्ड के हुने ? कति समयको अन्तरालमा खोल्ने ? कुन–कुनलाई सम्बन्धन दिने ? बहिरङ्ग सेवा के हुन्छ ? फार्मेसी सेवा कसरी दिने ? यावत मापदण्डमा ध्यान दिएर सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने थियो । मापदण्ड पुरा गरेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु पथ्र्यौ । त्यसमा सरकार चुक्यो ।
यहाँ ‘अण्डा पहिला कि चल्ला पहिला’ भनेको जस्तो भयो । पहिला पूर्वाधार विकास भएपछि सम्बन्धन दिने कि सम्बन्धन दिएर पूर्वाधार विकास गर्ने भन्नेमा राज्य अल्झेको जस्तो देखिन्छ । वास्तवमा निजी क्षेत्रले मेडिकल क्षेत्र धान्न सक्दैन् । त्यसप्रति ध्यान नदिइ निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दियौं । अहिले मापदण्ड पुरा गरेका कुनै मेडिकल कलेज छैनन् ।
मेडिकल शिक्षा संचालनको बारे माथेमाको प्रतिवेदन पनि पूर्ण छैन । मेडिकल शिक्षा भनेको एमबिबिएस शिक्षा मात्र होइन । माथेमाको प्रतिवेदनमा गुणस्तरीय शिक्षा, हस्पिटल, शुल्क, मापदण्डलगायत तमाम विषयमा समेटिएको छैन् । उनले प्रतिवेदनमा कस्तो विषय पढाउने ? कति विद्यार्थी हुने ? कति शैया हुने ? कति क्षेत्र समेट्ने भन्ने मात्र छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर राम राज्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्रतिवेदनमा कतिपय प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नेसम्मको कुरा हो ।
सबैभन्दा पहिले हामीले दलाली गरेर मेडिकल शिक्षा बजारमा खोल्यौं । राज्यको तर्फबाट कमजोरी भयो । यो गलत निर्णय थियो । अब त्यो निर्णय सच्याउनको लागि हामीले प्रयन्त गर्न सकिन्थ्यो । यसलाई डाक्टर गोविन्द केसी लगायतले राजनीतिक रङ्ग भर्ने काम गर्नुभयो । मेडिकल काउन्सिलमा छदा केदार नरसिंह केसीहरुले केहिपनि नियमन गर्नु भएन ।
मेडिकल शिक्षालाई निजिकरण गर्ने मात्र समस्या होइन । निजिकरण गरिसकेपछि मापदण्ड पुरा गर्न, अनुगमन नियमन गर्न, मेडिकल काउन्सिल, डिन कार्यलयसमेतले त्यतिबेला केहि पनि गर्न सकेनन् । त्यति बेलादेखि नै मेडिकल क्षेत्र बिग्रिदै आएको हो । यो अहिलेको समस्या होइन । अहिले मेडिकल शिक्षा सबैभन्दा सजिलै नाफा कमाउने उद्योगमा परिणत भएको छ । मेडिकल कलेजका संचालकले मध्यम बर्गिय परिवारका मानिसले आफ्ना छोराछोरीलाई जसरी पनि पढ्न पठाउँछन् भन्ने मानसिकता बोकेका छन् । यिनै मानिसले मेडिकल कलेजलाई लुटि खाने ठाउँ बनाए ।
मेडिकल कलेजमा देखिएको बिकृतिलाई समाधान गर्न सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ, नियमन गर्नु पर्छ । विद्यार्थीसँग अनावश्यकरुपले थुपारिएका फि तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ । मेडिकल कलेजले चार बर्षसम्मको फि एकैचोटि असुल गर्छन्, नगरे अविभावकसँग ब्याजसमेत असुल गर्छन । यस्तोमा कुनै एकदुई मान्छे अनसन बस्दैमा समाधान हुँदैन । यसमा राज्य, मेडिकल काउन्सिल, डिन कार्यलयले कडाइ गर्नुपर्छ ।
सम्बन्धन दिने विषयमा विश्व विद्यालयले सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ । खराब गतिविधि भएको मानिसलाई कारवाही गरे मात्र विकृति अन्त्य हुन्छ । मेडिकल क्षेत्रमा राज्य भनेकै मेडिकल काउन्सिल हो । उसले कडाइ गर्नु पर्यो । अहिले त्यसको नेतृत्व सम्हाल्न डाक्टर भगवान कोइराला आउनु भएको छ । उहाँले सुधार गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पलाएको छ ।
मेडिकल कलेजको सन्दर्भमा एउटा किस्सा राख्न सान्दर्भिक देखिन्छ । एकजना ग्राहक एउटा रेष्टुरेन्टमा खाना खान प्रवेश गरेछ । टेबुलको मेनु र आफुसँग खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई मुल्याङकन गरेपछि ग्राहकले खाना अर्डर गरेछ ।
त्यसपछि खाना टेबुलमा आयो । उसले खाना खाँदै गर्दा बीचमै रेष्टुरेन्टका वालाले तपाईको अर्डर गरेको खानाको मूल्य बढेको जानकारी दिएछ । अब बढेको मूल्यको के अर्थ ? त्यसको परिणाम के हुन्छ ? त्यहि भएको छ, अहिलेको मेडिकल कलेज ।
मेडिकल कलेजले साविक फि लिनुपर्छ । पहिले नै विद्यार्थी र अविभावकलाई वास्तविक शुल्कको जानकारी दिनुपर्छ । बिचमा आएर शुल्क बढाउनु त भएन नि । यस हिसाबले मेडिकल कलेजले गैह्रकानूनी रुपले रकम असुल गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
मेडिकल कलेजको कारण विद्यार्थी र अविभावकलाई मर्का परेको छ । हामीले सबै जग्गा जमिन बेचि छोरा छोरीलाई डाक्टर बनाउने सपना बोकेर उनीहरुलाई पढ्न पठाएका छौं । तर, बिचमा आएर शुल्क बृद्धि गरेका छन् । के आधारमा बढाएको हो, त्यो पनि थाहा छैन । बढाउनु आगाडि विद्यार्थी र अविभावकलाई कुनै जानकारी दिएको छैन ।
यदि शुल्क बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएमा शिक्षकको तलब २० प्रतिशत बढायौं । कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढायौं । भौतिक पूर्वाधारमा यति खर्च भयो भनेर वास्तविक जानकारी विद्यार्थी र अविभावकलाई दिनुपर्छ । कसैलाई जानकारी नदिइ शुल्क बढाएका छन् । यो सरासर गलत छ । यसले निजि क्षेत्रकै शिक्षामा बेज्यत गरेको छ ।
मेडिकल शिक्षामा देखिएको बिकृतिलाई अन्त्य गर्न सरकारलाई हामीले चिकित्सक शिक्षा आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं । त्यो आयोग प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने अति शक्तिशाली आयोगले मेडिकल क्षेत्रको सबै कुराहरु यसले हेर्छ ।
मेडिकल काउन्सिलले हेर्ने होइन । आयोगले हेर्ने हो । अध्ययन गरेरनै हामीले सुझाव दिएको थियौं । सुझाव अनुसार कार्यन्वयन हुदै जानु पर्यो । डाक्टरले हामीलाई औषधी दिइसक्यो । औषधी सेवन गर्नु पर्यो नि । औषधी सेवन नगर्ने अनि यस्तो भयो र उस्तो भयो भनेर हुन्छ ?
हामीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझावमा कहिले फि उठाउने ? पूर्वाधारको मापदण्ड के हुने ? कहाँ कहाँ मेडिकल कलेज खोल्ने ? जस्ता विषय समेटेर प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं । नियमनै मान्दैन भने त राज्यनै भएन नि । मेडिकल क्षेत्रमा समस्या आउनुको मुख्य दोषी सरकार हो । निजी क्षेत्र हामीलाई चाहिन्छ । नचाहिने होइन । तर उनीहरुलाई सरकारले नियमन गर्नु पर्छ । सरकारले अनुगमन र नियमन गर्न सकेन भने निजी क्षेत्रले मुनाफालाई बढाउँदै लैजान्छ । मुनाफा बढाउने नाममा रातारात धनी बन्नु त भएन नि । निजी क्षेत्र भट्टाभट खुल्दै जाने र सरकारले नियमन नगर्ने हो भने भाँडभैलो हुन्छ ।
सरकारको कमजोरीका कारण निजी मेडिकल कलेजले फाइदा उठाइरहेका छन् । यसमा सरकारको पनि मिलेमतो हुन सक्छ । सरकार, आयोग र मेडिकल कलेज सबै मिलेर समस्या आएको जस्तो लाग्छ । नत्र लामो समयसम्म पनि किन हाम्रो सुझाव कार्यन्वयन भएको छैन ?
यहाँ विधिको शासन भएन । विधिको शासन भएन भने विकास हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा भोलि बाहिरको लगानी कसरी आउँछ ? ठुला लगानी कर्ताले कसरी लगानी गर्छ ? विश्वास दिलाउनको लागिनै विधि चाहिने हो नि । अहिले देखिएको बिक्रृतिको अन्त्य गर्न विधिको शासनको प्रत्याभुति सरकारले दिनु पर्छ । यसको लागि तत्काल हामीले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्नु पर्छ । चारचार बर्षसम्म पनि सरकार के हेरिबसेको छ ?
भारतमा शंकराचार्य जस्ता ब्यक्तिलाई जेलमा राखेको छ । किनभने त्यहाँ सर्वोच्च अदालतको फैसला अक्षरसः कार्यन्वयन गर्छ । सबैले कानून पालना गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? सरकारले भनेको नमान्नेलाई अदालतमा उभ्याउनु पर्छ । सरकारको काम नियम, कानून पालना गराउने र कार्यन्वयन गर्ने हो । यदि कार्यन्वयन भएन भने अस्तव्यस्त भइहाल्छ नि ।
सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वय नभए कानूनी राज्य नै भएन । जब राज्य कमजोर हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न किसिमका माफियाहरु हावी हुन्छ । माफिया भनेकै नियम कानून नमान्नेहरु हुन् । मेडिकल कलेजले जुन गैह्रकानूनीरुपमा शुल्क उठाएको छ, त्यो तत्काल समायोजन र फिर्ता गर्नुपर्छ ।
आवश्यक भयो भन्दैमा मनलाग्दी तरिकाले फि बढाएर हुदैन । फि बढाउनुको सत्य, तथ्य कुरा बाहिर आउनु पर्छ । शिक्षकको तलब बृद्धि कति ? घरभाडा कति ? कर्मचारीको तलब कति ? यी सबै कुरा बाहिर आउनु पर्छ । उही रेष्ट्रेन्टमा खाँदाखाँदै मेनुको मूल्य बढाएको जस्तो गरेर भएन नि ।